Ambassador Nyikayaramba Vashaya neChirwere cheCovid-19
Pallbearers stand next to the coffins of three top government officials prior to their burial, at the National Heroes Acre in Harare, Wednesday, Jan. 27, 2021.
Vanga vari mumiriri weZimbabwe kuMozambique, Retired Lt. General Douglas Nyikayaramba, vashaya nechirwere cheCovid-19.
VaNyikayaramba, avo vaive mumwe wevakuru vemauto vakabvisa hurumende yemushakabvu VaRobert Mugabe nechisimba muna Mbudzi 2017, vanonzi vashaikira muHarare mushure mekurwara nechirwere cheCovid-19
VaNyikayaramba vakasiya basa kuchiuto apo vakaenda pamudyandigere muna 2019 ndokuzodomwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuva mumiririri weZimbabwe kuMozambique.
VaMnangagwa vanonzi vazivisawo nezvekushaya kwaVaNyikayaramba kudare remakurukota ehurumende pamusangano wavaita mangwanani.
VaNyikayaramba, avo vanga vava nemakore makumi matanhatu nemana, mumiririri weZimbabwe kune dzimwe nyika wechipiri ashaya nedenda reCovid-19 zvichitevera kushaya kwaVaJethro Ndlovu vaive mumiririri weZimbabwe kuUnited Arab Emirates.
VaNyikaramba vashayawo mushure mekushaya nechirwere cheCovid-19, kwemukoma wavo, uyo aive mukuru wemajeri, Retired Major General Paradzai Zimhondi, avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere cheCovid-19.
Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaAmon Murwira, vazivisa nyika nezverufu rwaVaNyikayaramba, vakati hurongwa hwekuradzikwa kwavo hwuchaziviswa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vati bato ravo pamwe nenyika yose zvarasikirwa zvikuru nekushaya kwegamba rakarwira rusununguko rwenyika.
Zvichakadaro, vanga vari mutauriri weNational Blood Services, Muzvare Esther Masunda, vashayawo.
Hatina kukwanisa kunzwa denda ravauraya.
Asi nhengo yeZimbabwe Institute of Public Relations, VaLenox Mhlanga, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yarasikirwa zvikuru nemunhu anga achishanda nemazvo kuitira kuti nyika iwane ropa rakakwana.
Bazi rezvehutano rakazivisa neMuvhuro kuti vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga kupararira gore rapera, vave chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matatu nevasere kana kuti 1,339.
Vanhu zana nevatanhatu 106 vakabatwa nechirwere ichi munyika nezuro wakare, uye vose havana nhoroondo yekubuda munyika, vakawanda vavo vari vemuHarare umo makabatwa vanhu makumi mana.
Izvi zvasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave pazviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere, kana kuti 34, 658.
Huwandu hwevanhu vapora hwasvika zviuru makumi maviri nezvisere nemazana masere nemakumi maviri nevashanu kana kuti 28, 825. Vanhu vachiri kurwara va zviuru zvina nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 4 494.
Nyanzvi mune zvehutano uye vaimbove gurukota rezvehutano, VaHenry Madzorera, vanoti kunyangwe zvazvo huwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwaderera, vanhu vanofanirwa kuramba vachitevedzera nzira dzekudzivirira chirwere ichi kuitira kuti huwandu uhwu husakwire zvekare.